जापानमा खरानी भन्दा जोगी धेरै
जापानवासी नेपालीहरुको सेरोफेरो अनुसार एक बर्ष पहिलेसम्म साधरण सभा सम्पन्न गर्दै आएका नेपालीहरुले यो बर्ष देखि भने जापानमा पनि महाअधिबेशन सम्पन्न गर्ने थालनी भएको छ । अस्ति मात्रैको कुरा हो । जापानमा आदिवाशी संघ दश बर्ष पहिले देखि हुंदा हुंदै पनि विवादस्पद जनजाती महासंघको प्रथम महाअधिबेशन सम्पन्न भएको छ । त्यस्तैगरि आगमी मार्च महिना पनि दुई तिन वटा संघसंस्थाको प्रथम र दोश्रो अधिबेशन हुने संजोग जुरेको छ । नाम चलेका नेता र कलाकारहरुको जमघटका साथ यो पालीको मार्च महिना अधिबेशनमय हुने भएको छ ।
यहि शन्दर्भमा आफनै बाध्यता र विवस्ताले जहां जसरी गएर रहे पनि नेपाल आमाका सन्तानहरु यो बिदेशको अनेकौ समस्याहरुको बाबजुत पनि चुप्प लागेर हात बाधेर बसेकै छैनन् । पराई भूमीमा दिन भरी सुपारी घोटाई कामले थकित भएर कोठामा लुसुक्क छिर्छन् तर कहिलै सन्तोषले खान र सुत्न सक्दैनन् । हप्ताको बल्ल एक दिन बिदा आउछ । बरु त्यतिको बिजी कामको बेला हुदैन । के के भनेर दौडधुप गरिरहेका हुन्छन् ।
अलि कति अग्रसर त्यो पनि सिमित ब्यक्तिहरुको पहलबाट केहि समय यता एक पछि अर्को गरी संघसंस्थाहरु च्याउ उम्रे झैं उम्रेका छन् र उम्रंदै छन् । पार्टीगत, जातिगत, सामाजीक, क्षेत्रीय र लैंगिक तरिकाले गनेर नसकिने संख्या भैसकेको छ । अझै कति थपिने हुन थाहा छैन । एक आपसमा संगठित हुनु भनेको गौरवकै कुरा हो । यदी एकतामा अनेकता नआएमा र आपसी भाईचारको बिकास भएमा मानव समाजमा संगठित हुने जस्तो उत्तम कुरो अरु केही पनि हुन सक्दैन । तर जापानवासी नेपालीहरुको लागि संघसंस्था भनेको कुनै एक संस्थाको ठूलै पगरी गुठेर हिड्ने फेशनै हो की जस्तो लाग्न थालेको छ । त्यति मात्रै होर ? पापाको पनि माया चिचीको पनि माया भन्या जस्तैः नैतिकताको ख्यालै नगरी एउटा संस्थाको अध्यक्ष पदमा रहेको ब्यक्ति अर्को संस्थाको सदस्य पद लिएका पनि छन् । यस्ता उधाहरणहरु धेरैनै छन् । यता गए पनि, उता गए पनि र जता गए पनि त्यहि पुरानै अनुहार देखिन्‍छन् । गर्दा गर्दा ब्यक्ति एक रुप अनेक साबित भईसकेकॊ छ ।
कुनै संघसंस्था चुस्त गतिमा देखिएको छैन । काम धन्दा भन्दा पनि पद र नामको होडबाजी मात्रै चलेको देख्दछु । अचेल काम भन्दा कुरा धैरै, कुरा भन्दा आफ्नो नाम उल्लेख भएको समचार झन् धेरै हुन थालेको छ । के यस्तो रोग अथवा फेशनले भविष्‍यमा गतिलो रुप दिन सक्ला ? अब पनि एउटै ब्यक्तिले दुई तिन वटा दुंगा हांकेर पार लगाउन सक्दैन भन्ने कुरा अरु कसैलाई महसुस हुन सक्दैन भने मेरो बुझाई सरासर अनर्थ हुन सक्छ ।
आजसम्म जापानमा रहेका संघसंस्थाद्धारा सामुहिक रुपमा उल्लेखनीय कार्यहरु नभएका पनि हैनन् । त्यहि नै गर्ब गर्ने पक्ष हो । र भैरहेको जति पनि समाजिक योगदानहरुको उच्च सम्मान र कदर गर्न कसैले चुकाउनु र कन्जुस्याई गर्नु पनि हुदैन । अझै थप उर्जा दिने हामी सबैको साझा कर्तब्य हो । तर नेपालबाट नाम चलेको नेता र कलाकार लिएर भब्य कार्यक्रम गर्दैमा सामाजीक सेवा र राष्ट्रलाई टेवा पुग्छ भन्ने प्रवाशी नेपालीको हाबी भने निकै नै चलेको छ । घाटै सहेर भएपनि केही समय संस्था र नाम त चम्कला ! ढाडै सेक्किने गरि घाट परेको मर्म कस्ले बुझ्ला ? खरानी भन्दा जोगी धेरै भएको अर्थ रहला ? अनि कसरी समाजीक बिकृतिको दोहलो काट्ला ? मौलिक समाज र देश प्रतिको जिम्मेवार बोध होला ? मात्रै आफ्नो नाम र संस्थालाई चम्काउने लैबरिलैमा गांठी कुरा बिर्सन त भएन नी ! यहि क्रम रहिरहने हो भने जापानमा सचेत नेपाली योगीको हैन अचेत नेपाली जोगीको घान नहोला भन्न सकिन्न । अन्तमा म आफैलाई पनि निल्न र पच्न नसकेर ओकल्न बाध्य भएकी छु । अरुलाई पनि खर्रो तर्रो र सत्य तितो लागेर नपचेमा माफी चाहान्छु ।